Essay – Min Thayt
“လူတစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကို သိချင်ရင်၊ သူ စိုက်တဲ့ ခြံမှာ ပေါင်းမထအောင် ဘယ်လောက် ရှင်းနိုင်သလဲ ဆိုတာကို ကြည့်နိုင်သတဲ့။” ကျနော်တို့ ကြိုးစားစိုက်ပျိုးတဲ့ အပင်တွေ အမြောက်အမြား ရှိပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် လည်း၊ ကျနော်တို့ စိုက်တဲ့ခြံထဲမှာ ပေါင်းမြက်တွေ အပြိုင်းအရိုင်းနဲ့ မင်းမူနေတာများတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ မှာလည်း ဥယျာဉ်မှူးစိုက်လိုက်တဲ့အပင်တွေထက် အပိုဆာဒါး ပေါက်လာတဲ့ ပေါင်းပင်တွေက ပိုတယ်...
Articles Essay Literature Perspective Politics Youth
▣ ကဗျာ / မင်းကိုနိုင့်ပန်းပင် – တင်မိုးရဲ့ ပန်းပွင့်
ပြီးခဲ့တဲ့လ (စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၁) က လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ မင်းကိုနိုင်ရဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ဖတ်လိုက် ရတယ်။ ပန်းပွင့်တဲ့အလုပ်ရိုးတံက လုပ်လိမ့်မယ်အမြစ်အလုပ် အမြစ်လုပ်ရုံပဲမြေသားနက်နက် ရေရှာထွက်မယ်အသက်ဆက်မယ်သစ်ရွက်က သစ်ရွက်အလုပ်လုပ်ရုံပဲနေပူခံလျက် အစာချက်မယ်အသက်ဆက်မယ်….. (မင်းကိုနိုင်၊ ၂၀၂၁) ကျနော်ဟာ ကဗျာတွေ ဖတ်မိရင်၊ ကဗျာတွေထဲက အဘိဓမ္မာကို ရှာမိတယ်။ ကဗျာထဲမှာ ဘယ်လိုအဘိဓမ္မာတွေကို ကိန်းအောင်းနေသလဲ။ အဲသည့်အဘိဓမ္မာရဲ့နောက်ခံတွန်းအားက ဘာဖြစ်မလဲ။ ကဗျာဆရာဟာ...
• ချစ်တတ်တဲ့သူတွေဟာ အသည်းပိုကွဲရပါတယ်။• အထူးသဖြင့် နှလုံးသားနဲ့ ရင်းရတဲ့ကိစ္စတွေက အသည်းကွဲနိုင်ချေ အလားအလာ အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။• နိုင်ငံရေးမှာလည်း အသည်းကွဲတတ်သတဲ့။ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးအသည်းကွဲတဲ့သူတွေ ခပ်များများ ရှိမယ်လို့ ပြောရင် မှန်နိုင်မလား။ သို့တည်းမဟုတ် မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးအသည်းကွဲတဲ့သူ ခပ်နည်းနည်းပဲ ရှိတယ်လို့ ပြောရင် မှန်နိုင်မလား။ ချင့်ချိန်တွက်ချက်ရရင်တော့ - မြန်မာ့နိုင်ငံရေးခရီးကြမ်း ဖြတ်သန်းမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လူအတော်များများ...
▄ ကျနော် ဝေဖန်ရေးသမား ဟုတ် / မဟုတ်
ကျနော့်စာများကို ဖတ်ဖန်များသည့် မိတ်ဆွေတစ်ချို့နှင့် ရင်းနှီးသူစာဖတ်သမားတစ်ချို့က ကျနော့်ကို ဝေဖန်ရေးဆရာဟု မှတ်ချက်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ပြောသောအခါ၊ ကျနော် ရယ်ကျဲကျဲနှင့် ဘာအဖြေမှပြန် မပေးဘဲ ရယ်နေတတ်သည်။ အကြောင်းမှာ၊ ကိုယ့်စာများကို ကိုယ်ပြန်သတိရမိ၍ဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူမိတ် ဆွေများက၊ သဘောရိုးဖြင့် မှတ်ချက်ပေးကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျနော့်၏ ပြင်းထန်သော စကားလုံးရိုက်ချက်များ ကြောင့် အောက်သက်သက်ဖြစ်သွားကြသော လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ မေတ္တာဓာတ်ကို ကျိတ်၍ ခံယူနေရကြောင်းကိုမူ ကျနော်...
Min Thayt December 2, 2019 December 4, 2019
ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီဇင်ဘာကို ရောက်လာပြီ။ ၂၀၁၉ လည်း ကုန်တော့မယ်။ နှစ်သက္ကရာဇ်တစ်ခု ပြီးစီးခြင်း။ ပြီးစီးခြင်း ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုပဲ သုံးချင်ပါတယ်။ သာမန်ယေဘုယျပြောကြတဲ့ အသုံးကတော့ နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးခြင်းပေါ့။ ၂၀၁၉ ကို သုံးသပ်ကြည့်၊ ဆင်ခြင်ကြည့်လို့ လုပ်ချင်ပါလျက်နဲ့ မလုပ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေ၊ သွားချင်ပါလျက်နဲ့ မသွားလိုက်ရတဲ့အရာတွေ၊ လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပေမယ့် မလုပ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေ၊ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် စာရင်း မှာ မပြီးစီးလောက်တဲ့...
Min Thayt December 1, 2019 December 4, 2019
ဘယ်လိုလူဟာ နှစ်လိုဖွယ်ရာဖြစ်သလဲ။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ကိုယ့် ဓာတ်ခံနဲ့ ဘယ်လိုလူက ငြိသလဲဆိုတာ စိတ်ထဲက သိနေပါတယ်။ ခံစားမိနေတယ်။ သူနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရ တာ၊ သူနဲ့အလုပ်အတူတူ လုပ်ရတာ၊ သူနဲ့ သွားလာရတာ၊ သူနဲ့ ပြောဆိုရတာ၊ သူနဲ့ ပူးတွဲရတာ… စတာတွေ ဟာ နှစ်လိုဖွယ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ သူနဲ့ အပေးအယူတည့်နေတယ်။ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့အကြားမှာ...
• ကျနော် စိတ်သန့်ချင်တယ် • ကျနော် စိတ်လုံချင်တယ် အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေတိုင်း၊ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ပြီးသွားတိုင်း ကျနော့်ကို ကျနော် ပြန်ပြန်မေးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီ့မေးခွန်းက စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲက စာသားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုက်တန်တဲ့ရင်းနှီးမှုရှိရဲ့လား…. ဆိုတဲ့ မေးခွန်း။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် အလုပ်တစ်ခုခုကနေ အကျိုးရလဒ်တစ်ခုခုကို ခံစားမိတိုင်း ဒီရလဒ်နဲ့ ငါဟာ ထိုက်တန်ရဲ့ လားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခဏ...
Essay PDF Download Perspective
Min Thayt November 4, 2019 November 4, 2019
The-LIFE-by-Min-ThaytDownload ဘဝပင်လယ်ဟာ လှိုင်းလည်း ထူတယ်။ ဝဲလည်း ရှိတယ်။ ငါးလိပ်မကန်းတွေလည်း ပေါတယ်။ မုန်တိုင်းလည်း ထန်တယ်။ ကျယ်လည်း ကျယ်တယ်။ နက်လည်း နက်တယ်။ ဆန်းလည်း ဆန်းကျယ်တယ်။ ဘဝဟာ ပင်လယ် နဲ့ တူတယ်။ ဘဝပင်လယ်မှာ မျောနေတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ မြုပ်သွားတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ မသေရုံ ကူးခတ်နေတဲ့သူ တွေ ရှိတယ်။ ကမ်းတစ်နေရာရာကို...